Munaasabad lagu taageerayay dowladda Soomaaliya oo ka dhacday dalka Mareykanka
Maine Portland Axad 30 September 2012 SMC
Munaasabad lagu taageerayay dowladda Soomaaliya oo ka dhacday dalka Mareykanka.
Munaasabad lagu maamuusayay soo dhaweynta Madaxweynaha Cusub ee Soomaaliya Prof, Xasan Sheikh Maxamuud Iyo Gudoomiyaha Baarlamaanka Soomaaliya Prof, Maxamed Sheikh Cusman(Jawaari) ayaa ka dhacday gobalka Maine Portland ee dalka Mareykanka, waxaana munaasabadda ka qaybgalay mas'uuliyiin ka socday qaybaha kala gaddisan ee bulshada ku nool gobalada la isku yiraahdo (New-England) Massachusetts, New Hampshire, Maine, Vermont, Rode Inland, iyo Connecticut.
Mas'uliyiinta munasabadaaas ka hadlay waxay dhammaantood soo dhaweeyeen doorashadii lagu doortay Madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud iyo Gudoomiyaha Baarlamanka Prof, Maxamed Cusmaan (Jawaari) oo ay ku tilmaameen in ay aheyd mid xalaal ah islamarkaasina u dhacday si Cadaalad ah.
Kulanka waxaa ka hadlay C/rahmaan Warsame Cusmaan ugu horeyntiine ugu hambalyey Madaxweynaha cusub Xasan Sheikh Maxamuud xilka loo doortay kaddibna kula dardaarmay in uu la yimaado karti ka duwan madaxdii ka horeysay isaga islamarkani uu soo dhiso xukumad leh tayo leh.
Sido kale waxaan rabaa inaan Soomaalida meel kasta oo ay jogta ugu baaqo sidii loo taageeri lahaa dowlada cusub ee inoo dhalatay isla-markaasine aan taaba-gelino dhinacyada dhaqaalaha aqoonta siyaasadda iyo waliba xiriirka kala dhaxeeyo dadkeeda oo aan ugu horeyno anaga .
Qofkii haya aqoon waaa inuu geeyaa dalkiisa hooyo ninkii dhaqaale leh waxaa looga bahan-yahay in uu maalgashto gudaha dalkiisa hadii intaasi aan helno waxaa inoo suurta galeysa kobcinta dhismaha wadankeenii .
Shamso Kulane oo ka mid ah gabdhaha deeganka Maine Portland ayaa munaasabadda ka hadashay, waxayna ugu horreyn u mahadcelisay guddigii soo qabanqaabiyay Munaasabadda lagu taageerayo Isbedelka kadhacay Soomaaliya .
Shamso, aya Madaxweyne Xasan ugu baaqday in uu ka shaqeeyo isu soo dhawaashaha dadka Soomaalida cadaalada dadka laga awooda badan yahay sida Dumarka Caruurta iyo waliba dadka waaweeyn oo aan xaquuqado helin waa sida ay hadalka u dhigtaye.
Xamza Haadoow oo ah gudoomiyaha Jaaliyadda Soomaalida ku nool gobalka Maine Portland -ayaa soo dhaweeyay Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheikh Maxamuud iyo gudoomiyaha Baarlamaanka islamarkaasi ku tilmaamay doorashada dhawaan ka dhacday dalka Soomaaliya mid taariikh ah.
“Anaga hadii an nahay jaaliyadda Soomaalida ee ku nool gobalada matanaha ah ee (New England) waxaan u dabaal degi doonaa sanad walba doorashadii taariikhiga aheyd ee ka dhacday Soomaaliya taasi oo aan ku tilmaami karo waxeey aheeyd mid cadaalad ah oo an dhawanahan ka dhicin dalkeena Hooyo.
Sidoo kale waxaa munaasabadda ka hadlay dad kale oo ay ka mid ahaayeen, Maxamed Cali,Maxamed Diini,Ararsame Cali Extra iyo waliba Fanaanada Caanka ah Shankaroon Axmed Sagal oo heeso guubaabin ka qaaday munaasabadda lagu tageerayay dowladda Soomaaliya.
Cabdiraxmaan Diiriye Nuur
USA Maine Portland